Izilinganiso ezingama-35 ezinhle zamaPhasika zokugubha iholide - Ukuzijabulisa
Izilinganiso ezingama-35 zamaPhasika zokwabelana nabathandekayo kuleli holide
35 Easter Quotes Share With Loved Ones This Holiday
Ingabe ubala izinsuku kuze kube yilapho ungadla ama-Peeps amaningi aneshukela futhi bunnies chocolate ngangokunokwenzeka (* ephakamisa isandla *)? Noma mhlawumbe uhlela ukugubha incazelo yenkolo yeholide, ephelele ngokudla kwe-Easter nobungani bomndeni imidlalo . Kunoma ikuphi, izingcaphuno ezimbalwa ezikhuthazayo nezihlekisayo ze-Easter nakanjani zizosiza, noma ngabe uzithumela ku-‘Gram noma ubheke ukufaka okunye ukuhlobisa kwama-Easter ekhaya lakho.
OKUSHIWO: Amakhadi E-Easter Ema-12 Awathunyelwa Kuwo Wonke Umuntu Omaziyo
1. Ngiyalithanda iPhasika. Kufana ne-Halloween yomama bebhola lezinkukhu zezingane. - UMathewu Grey Gubler
2. Ngisakholelwa kuSanta, i-Easter Bunny, i-Fairy Izinyo nothando lweqiniso. Ungazami nokuzama ukungitshela okwehlukile. - UDolly Parton
I-Ylanite Koppens / ama-Pexels
3. Ukutshala ingadi ukukholelwa kusasa. - U-Audrey Hepburn
4. Umngane weqiniso ngumuntu ocabanga ukuthi uyiqanda elihle, yize azi ukuthi uqhephukile kancane. - UBernard Meltzer
5. Umqondo omuhle: Ukuthola amaqanda e-Easter ngePhasika. Umbono omubi: Ukuthola amaqanda e-Easter ngoKhisimusi. - UJack Handey
6. Imbali iqhakaza ngenxa yenjabulo yayo. - U-Oscar Wilde
7. Umuntu wehlela emhlabeni, athathe izono zakho, afe, abuye emuva kwezinsuku ezintathu. Uyakholelwa kuye futhi uye ezulwini ingunaphakade. Uthola kanjani kulokho ukufihla amaqanda? Ingabe uJesu wayenenkinga ngamaqanda? Ngabe uhambe, ‘Uma ngibuya, uma ngibona noma yimaphi amaqanda, yonke into yensindiso icishiwe?’ - UJon Stewart
8. Umuntu kufanele enze i-X-ray esiswini sami ukuze abone ukuthi amaPeeps engiwadlile ngePhasika asekhona lapho, aqinile futhi awadayisi ngokuphelele. Futhi angikhulumi ngaleli Phasika elidlule. Ngikhuluma ngesikhathi sami sokugcina ukugubha iPhasika, ngo-1962. - uBill Maher
9. Ubhontshisi wePhasika wadla wonke amaqathi esamshiyela wona. Ingulube engaka. - USteve Carell
10. IPhasika lenzelwe ukuba wuphawu lwethemba, ukuvuselelwa, kanye nempilo entsha. - UJanine di Giovanni
11. IPhasika lokuqala lasifundisa lokhu: ukuthi impilo ayipheli futhi uthando alusoze lwafa. - UKate McGahan
12. Ngithanda iPhasika nje. Kuyiholide nje elihle kunawo wonke. Ngithanda uPeeps, nobhontshisi wejelly, futhi ngithanda onogwaja abamboziwe ngoshokholethi, kepha ngithanda uPeeps omuhle kakhulu. - Reese Witherspoon
13. Kuhlala kunezimbali kulabo abafuna ukuzibona. - UHenri Matisse
14. Ngangifuna ngempela ukuqamba [indodakazi yami] ngu-Easter Ann. Bengicabanga ukuthi yinhle kakhulu. Ngempela akekho owavuma nami. - Bhizi Philipps
15. Uma i-Easter isho noma yini kithi namuhla, isho lokhu: Ungabeka iqiniso ethuneni, kepha kwanqoba'hlala lapho. - UClarence W. Hall
16. Lapho umuntu abona khona amaqabunga abunile, uNkulunkulu ubona izimbali ezimnandi zikhula. - U-Albert Laighton
17. IPhasika ukuphela kwesikhathi lapho kuphephe ngokuphelele ukubeka wonke amaqanda akho kubhasikidi owodwa. - U-Evan Esar
18. IPhasika libaluleke kakhulu kimi. It'ithuba lesibili. - UReba McEntire
19. Kubhonethi yakho yePhasika, nakho konke ukujabula okukhona kuyo, Uzoba yintokazi evelele embukisweni wePhasika. - UHelen Merrill
20. Umama wayevame ukuthi iPhasika lamaGrikhi lalandela ngoba bese uthola izinto zishibhile. - U-Amy Sedaris
21. Usuku iNkosi edale ngalo ithemba kungenzeka kwaba yilolo suku okwadala ngalo intwasahlobo. - UBernard Williams
22. Ungalindi ukuthi umuntu akuphathele izimbali. Tshala ingadi yakho uhlobise umphefumulo wakho. - ULuther Burbank
23. Lokho kuyinto eyodwa enhle ngalo mhlaba ... Kuhlala kunesiqiniseko sokuthi kunemithombo eminingi. - LM Montgomery
24. Kufanele ngibe nezimbali, njalo futhi njalo. - UClaude Monet
25. LaliyiSonto Langephasika. Izihlahla eziqhakaza zagcwala wonke umoya ngephunga nenjabulo. - UHenry Wadsworth Longfellow
26. Ungalokothi uvumele izingane zakho zijabule kakhulu kunawe ngePhasika !! - UWill Smith
27. Ngokuza kwentwasahlobo, sengizolile futhi. - UGustav Mahler
28. INkosi yethu isibhale isithembiso sovuko, hhayi ezincwadini zodwa, kodwa kuwo wonke amaqabunga entwasahlobo. - UMartin Luther King Jr.
29. I-Easter ichaza ubuhle, ubuhle obungandile bempilo entsha. - S.D. UGordon
30. Ungazisika zonke izimbali, kepha awukwazi ukugcina intwasahlobo ingezi. - UPablo Neruda
31. Ukuphila nje akwanele. Umuntu kufanele abe nokukhanya kwelanga, inkululeko, nembali encane. - UHans Christian Anderson
32. Intwasahlobo'Injabulo enkulu kakhulu ngaphandle kokungabaza yilapho ikhipha izingane. - U-Edgar Guest
33. Ngabe awukho uKhisimusi ukube belingekho iPhasika. - UGordon B. Hinckley
34. Lapho kuqhakaza khona izimbali, kunjalo nethemba. - uLady Bird Johnson
35. Abukho ubusika obuhlala njalo; ayikho intwasahlobo eyeqa ithuba layo. - IHor Borland
OKUSHIWO: Imibono engu-15 Yemenyu YePhasika Iqinisekisiwe Ukuheha Izivakashi Zakho
izithombe zika kate middleton
amathiphu okwenziwa ngamehlo ansundu
kanjani amathiphu okukhula kwezinwele
zokupheka ezibandayo zehlobo
hollywood love izindaba movies list
ukuzivocavoca ukulahleka kwamafutha esiswini ekhaya